अर्थ/बजार – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्न एडीबीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) लाई प्रदान गरेको तीन लाख डलर बराबरको अनुदानबाट सुरक्षा सामग्री किनेर आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जारी प्रतिकार्यमा नेपाललाई सघाउन आज हस्तान्तरण गरिएका आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नेपालभरिका कोभिड–१९ अस्पतालमा ‘आइसोलेशन वार्ड’ तयार गर्न प्रयोग हुने एडिबीले जनाएको छ । त्यसैगरी युनिसेफले कोभिड–१९ फैलिन नदिन नेपाल सरकार तथा अन्य साझेदारसँग निकट सम्पर्कमा…
काठमाडौं :टुटल र पठाओलाई नरोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले निर्देशन दिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतसँगको बैठकमा मन्त्री नेम्वाङले कानुन नबनुन्जेल यस्ता सेवालाई नरोक्नका लागि निर्देशन दिएका हुन् । बुधबार भएको बैठकमा नेम्बाङले पठाओ र टुटल युवाको रोजाइमा परेकाले नरोक्नका लागि आदेश दिएको मन्त्रालयका सहसचिव देबेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
अर्थ/बजार, प्रदेश न तिन, राजनीति, समाचार
दमक, मंसीर १, झापाको दमक स्थित सुजुकी कारको बिक्रेता बि.आर.एन.ब्रदर्सलेसुजुकीको एस–प्रेसो कारको सर्वजनिक गरेको छ । आज एक कार्यक्रम गरी सुजुकी कम्पनीको ‘एस–प्रेसो’, ‘माई फस्र्ट एसयुभी’ सार्वजनिक गरेको छ । आजैबाटनै नेपाल अधिराज्यभरका ३६ वटा सुजुकी रिटेल नेटवर्क मार्फत सुजुकीको एस–प्रेसो कारको लन्च गरिएको बि.आर.एन. ब्रर्दशका संचालक संजु पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । पराजुलीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा दमक उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोकूल श्रेष्ठ रहनु भएको थियो । सोही अवसरमा दमक वाणिज्य संघका सम्पुर्ण नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु लाई बि.आर.एन. ब्रदर्शका तर्फ बाट खदा ओढाएर सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै…
दमक । झापाको दमकमा बिहिबार सुबिधा सम्पन्न बज्र नेवारी खाजा घर संचालनमा आएको छ । दमक ६ स्थीत नमुना मार्गमा सुचारु भएको सो नेवारी खाजा घरको उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष राजु खडका, कार्यसमित सदस्य द्धोया असिम राई ,रुवल अधिकारी तथा होटल ब्यबसायी माइपश्चिमका अध्यक्ष राजेन्द्र दंगालले संयुक्त रुपमा रिबन काटेर नेवारी खाजा घरको सुभारम्भ गर्नुभएको हो । झापा शिबसताक्षी ७ बैदार चोकका युवा ब्याबसायी युबराज बस्नेतले करिब ४५ लाखको लगानीमा नेवारी परिकारका साथै टिपिकल नेपाली खाना , खशीको फोक्सो फ्राई, ब्रियनीका आइटमहरु लगायतका खानाका परिकार उपलब्ध…
दमक १२ असोज/ झापाको दमक ६ स्थीत मिसाल मार्केटमा संचालित सिक्सटी नाइन फेसन वयेरले शनिबारबाट थप दुल्ला ब्राण्डका सेवा बिस्तार गरेको छ । ग्राहकको सुबिधालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा उत्पादीत दुल्ला ब्राण्डको लेदरका आइटमहरु सुचारु गरेको हो । पसलको नबनिर्बाचित दमक उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ सहित अन्य कार्य समितिहरुले संयुक्तरुपमा रिवन काटेर सुभारम्भ गरेका थिए ।पछिल्लो समय नेपाली ग्राहकहरुको रोजाइमा पर्न सफल दुल्ला ब्राण्डका सामग्रीहरु आकर्षक र किफाइती रहेकोले दमक लगायत आसपासका ग्राहकहरुको चाहानालाई सहज र सुलप रुपमा उपलब्ध गराउने उदेश्यले दमकमै सेवा सुभारम्भ गरिएको संचालक प्रेम गिरीले बताए…
September 24, 2019 September 24, 2019 सरोकार संवाददाता
झापा ७ असाेज । झापाकाे दमकमा क्यालीबर जुत्ताकाे अत्याधुनिक शोरुम सञ्चालनमा आएको छ । दमक निवासी युवा व्यवसायी प्रेम गिरीले नेपाली चर्चित उत्पादन क्यालीबर जुत्तकाे शोरुम मंगलबार बाट अाधीकारीक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । दमकमा लामाे समयदेखी ब्यवसाय गर्दै अाएका गिरीले दमकका बिभिन्न स्थानमा सिक्टी नाइन ब्रान्डेड वेर (69 BRANDED WEAR) संचालन गरी रहेका छन् । क्यालीबर जुत्ताकाे उक्त साेरूम दमककाे मिसाल बजार भित्र रहेकाे सिक्टी नाइन ब्रान्डेड वेर (69 BRANDED WEAR) संगै रहेकाे छ । स्वदेशी वस्तुलाइ प्राेत्साहन गर्दै नेपाला बनेकाे क्यालीबर जुत्ता स्टालिस्, लाउनमा सजिलाे अारामदायी भएकाले पार्टी, क्याजुअल र…
अर्थ/बजार, प्रदेश न एक, समाचार
नेपालको इतिहासमा बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो मर्जर हुने भएको छ । दुई वाणिज्य बैंकहरू ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक लिमिटेड एक–आपसमा गाभिने भएका हुन् । ग्लोबल र जनता मर्ज भएपछि वित्तीय आकार तथा संरचनाको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्नेछ । ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक लिमिटेड शुक्रबार मर्जरको सम्झौता भएको हो । मर्जरको सम्झौतामा ग्लोबल आइएमईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र जनता बैंकका अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै बैंकको सम्मान हुने तथा अस्तित्व रहने गरी मर्जरको सम्झौता भएको दुवै अध्यक्षले नयाँ पत्रिकालाई प्रतिक्रिया दिए । मर्जरको सम्झौता भएको बारेमा धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराइसकेको…
काठमाडौं १७ जेष्ठ २०७६ :- चौधरी ग्रुपले ‘फोर जी’ सेवाको लागि ह्वावेसँग सहकार्य गरेको छ । चौधरी ग्रुप र ह्वावेबीच १० करोड डलर रकमको सम्झौता भएको बताइएको छ । सम्झौता अनुसार चौधरी ग्रुपले ह्वावेको फोर जी फोन सेवा नेपालमा ल्याउने भएको हो । उक्त सम्झौतासँगै चौधरी ग्रुपले नेपालमा मोबाइल फोनको बजारमा प्रभाव जमाउने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । मोबाइलबाट ‘फ्रि भ्वाइस सर्भिस’ उपलब्ध गराउने तर डाटा र अनलाइन पेमेन्टसहित अन्य सेवामा पनि केन्द्रित हुने चौधरी ग्रुपका मालिका विनोद चौधरीले बताए । चाउचाउ व्यवसायबाट व्यवसाय सुरु गरेका चौधरीले बैंक, टेलिकम्युनिकेशन…